असल साथी कसरी चिन्ने ? कसलाई असल साथी भन्ने ? जान्नु पर्ने कुराहरु - उज्यालो पाटो
असल साथी कसरी चिन्ने ? कसलाई असल साथी भन्ने ? जान्नु पर्ने कुराहरु
एउटा मानिसका ३ जना साथी थिए । एउटा असाध्यै नजिक, चौबिसै घण्टासँगै हुने भने पनि हुने । दिनचर्याका हरेक काम सँगसँगै गर्ने । कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय मिल्दैनन् तर पनि साथै हुने । अर्को साथी थियो, जोसँग दिनमा एकपल्ट जस्तो भेट हुन्थ्यो । कहिलेकाँही कयौँ दिन भेट नहुने पनि हुन्थ्यो तर जब भेट भए पनि त्यो कति समयमा भेट भएको थियो भन्ने नलाग्ने । सँधै साथ भएको जस्तो । र, तेस्रो साथी थियो विदेशमा । उ काम गर्न र पैसा कमाउन विदेश गएको हो । उसँग फेसबुकमा बेला बेला मात्रै गफ हुन्छ ।
कसैले ३ जना साथी भएको त्यो मानिसलाई सोध्यो, “तपाईको असल साथी यी मध्ये को हुन् ?”
त्यो मानिसले केहि बेर सोच्यो र जवाफमा भन्यो, “ति तिनै जना मेरा असल साथी होइनन् । एउटा सँगै त हुन्छ तर अनावश्यक विवाद गरिरहन्छ अनि प्रगतिका कुरामा कहिलै साथ दिदैन । अर्को बेला बेलामा भेट हुन्छ, गफ गर्न रमाइलो हुन्छ तर उसले कुन बेला कसका अगाडी मेरो के पोल खोल्देला र मलाई लाजमर्नु हुने हो भन्ने डर भइरहन्छ । जो विदेशमा छ, उसलाई त आफ्नो कमाइको फूर्ति लगाएर मलाई होच्याउन पाए अर्थोक केहि चाहिदैन ।” केहि बेर सोचेर त्यो मानिसले थप्यो, “मेरा अरु पनि साथी छन् । जो मसँग कमै हुन्छन् । बेला बखतमा मात्रै भेट हुन्छ वा भनौँ, काम पर्दा मात्रै भेट हुन्छ । तर ति असल साथी हुन्छ । साँचो साथी हुन् ।”
यो प्रसंगबाट के बुझ्न सकिन्छ भने असल साथी भनेको नजिक भएर वा धेरै समय सँगै भएर मात्रै हुने होइन रहेछ । असल साथी हुनुका विशेषताहरु फरक हुने रहेछन् । त्यसो भए असल साथी भनेर कसरी चिन्ने ? कसलाई असल साथी भन्ने ? यो गहन प्रश्न हो तर केहि यस्ता कुराहरु हुन्छन्, तिनको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने असल साथी हो कि होइन भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ ।
हुन त, मानिस हो कुनै न कुनै बेला गल्ति गर्दैमा असल वा खराब भन्न सकिदैन तर नियमित त्यस्तै क्रियाकलाप भइरहन्छ भने त्यसले केहि निष्कर्ष भने निकाल्छ । यसैल कुनै अपवाद बाहेकको अवस्थामा तलका १० मध्ये कुनै गुणहरु नियमितरुपमा कसैले देखाइरहन्छ भने त्यो असल साथी हो भन्न सकिएला । आज असल साथीका गुणका बारेमा लेखेका छौँ । तपाईलाई मन परेमा सेयर गर्नुहोला । थप जानकारीका लागि उज्यालो पाटोको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला ।
१. तपाईको पछाडी तपाईको नराम्रो कुरा गर्दैन
तपाईको असल साथीले तपाई गलत हुँदा तपाईलाई नै सच्याउँछ वा आलोचना गर्छ तर अरु मानिसको अगाडी वा तपाई नभएको बेला तपाईको पछाडी तपाईको नराम्रो कुरा गर्दैन, बरु तपाईलाई जोगाउँछ, बचाउँछ वा तपाईको तारिफ गर्छ । कतै तपाइकै जस्तो योग्यता भएको मानिसलाई अवसर भए तपाईको बारेमा कुरा गर्छ । यसै पनि कसैको पछाडीको आलोचना गर्नेहरुको नियत ठिक हुदैन वा स्वभाव ठिक हुदैन । असल साथीले यो गुण सँधै कायम गर्छ ।
२. अरुको अगाडी तपाईलाई सानो देखाउने कोशिस गर्दैन
यो कुरा असल साथीले मात्रै होइन कि असल मान्छेले नै याद गर्नु पर्ने कुरा हो । यसै पनि कसैको अगाडी कसैलाई सानो देखाउनु राम्रो व्यवहार होइन । संसारमा कोही पनि पुर्ण हुदैन र संसारमा कमजोरी नभएको कोही पनि मानिस हुदैन । यस्तोमा तपाईमा पनि केहि कमजोरी हुन्छन् । ति कमजोरी अरु मानिसका सामू उछालेर तपाईलाई सानो देखाउँने कोशिस गर्ने मानिस तपाईको असल साथी हुदैन ।
३. असल साथीहरु व्यर्थको विवाद गरिराख्दैनन्
साथी हुनु भनेको सबै कुरा मिल्नु पर्छ भन्ने होइन । हरेक कुरामा हो मा हो गर्नु पर्छ भन्ने त झन् कदापि होइन तर यसको पनि शैलि हुन्छ । असल साथी राम्रो आलोचक पनि हुन्छ । तपाईले गर्नु भएको कुराहरुलाई सफल बनाउँन त्यसमा हुन सक्ने दुर्गुण, अफ्ठ्याराहरुको बारेमा सजग गराउने जिम्मा पनि साथीको हुन्छ तर त्यसो भन्दैमा तपाईसँग व्यर्थमा विवाद गरिराख्दैन ।
४. साँचो साथीले तपाईको कुरा सुन्छ
कुरा सुन्ने मान्छे पाउनु भाग्यको कुरा हो । आजको संसारमा जो पनि भन्न चाहन्छ । यति सम्म कि तपाई एउटा समस्या भन्नुस्, तपाईको छेउमा भएको मानिसले त्यस्तै अरु तिनवटा समस्याहरु सुनाइदिन्छ । यसले तपाईको मनको तनाव कम हुने भन्दा बढाउछ । यसैले साँचो साथीले तपाईको सबै कुरा सुन्छ । तपाईलाई आफ्नो पिडा पोख्न दिन्छ ।
५. तपाईलाई हतोत्साहित बनाउदैन
तपाईले आफ्नो आइडिया वा योजना सुनाउँदा तपाईले साथी भन्ने मानिसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ ? उसले आधा अपुरो सुनेर त्यसलाई असफल हुने भन्दिन्छ कि त्यसमा अपुरा भएका कुराहरुमा आफ्नो सुझाव दिएर बाटो देखाउँछ र तपाईलाई थप उत्साहित गर्छ ? यो कुराले त्यो व्यक्ति तपाईको असल साथी हो कि होइन भन्ने कुराको फैसला गर्छ । तपाईलाई हतोत्साहित बनाउँने मानिस तपाईको असल साथी हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।
६. तपाईको विगत कोट्याएर पिडा थप्दैन
साथी भए पछि तपाईको विगत पक्कै पनि उसलाई थाहा हुन्छ । या त उ विगतमा तपाईसँग साथै हुन्छ या त तपाईले कुनै समयमा त्यो बताएको हुनु पर्छ । जे भए पनि तपाईले बिताएको अतितलाई लिएर फेरि कुनै पनि बिषयमा ति कुरा कोट्याएर तपाईको असल साथीले तपाईलाई पिडा दिदैन । बरु त्यो पिडा भुलाउन वा त्यो नसम्झाउनका लागि हरदम प्रयास गर्छ ।
७. तपाईको साथ छोड्दैन
यसको अर्थ यो होइन कि असल साथी हुनलाई सँधै सँगै नै हुनु पर्छ । दुरता वा निकटताले मान्छे कसैको असल साथी हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउन सकिदैन । साथ नछोड्नुको अर्थ हो, तपाई कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यसमा तपाईको साथीको साथ रहन्छ कि रहदैन भन्ने हो । नत्र भनाइ छ, गोजीबाट दुलो के परेको थियो, पैसा भन्दा पहिले साथी घटे । यसैले बिषम परिस्थितीमा वा अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै साथ छोड्ने मान्छे असल साथी हुदैन ।
८. तपाईको सफलतामा इर्ष्या गर्दैन
सबै भन्दा सम्झनु पर्ने कुरा यो पनि हो । तपाईको सफलतामा तपाईको साथीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । तपाईको सफलतामा पार्टी दे भन्ने साथीहरुले केहि पैसा मात्रै सकिदिन्छन् तर तपाईको सफलतामा इर्ष्या गर्नेहरुले तपाईको समयलाई नै दिक्दारलाग्दो बनाइदिन्छन् । यसैले सफलतामा इर्ष्या गर्नेहरुलाई साथी नबनाउनुहोस् ।
९. तपाईलाई कम आँक्दैन
तपाईले कुनै काम गर्न थाल्दा हिम्मत दिन्छ कि तैले सक्दैनस् भनेर तपाईको क्षमतालाई कम आँक्छ ? यो ध्यान दिनुहोला । तपाईको क्षमतालाई कम आँक्नेले तपाईको प्रगतिलाई रोक्छ र प्रगति रोक्नेहरु कसरी असल साथी बन्ला्न र ?
१०. ‘टाइम पास’ गर्ने मात्रै साँचो साथी होइन
यो त माथि पनि भनिसकियो कि केवल भेट भएर रमाइलो गरेर टाइमपास गर्ने मात्रै साथी हुदैनन् । दुखसुखमा साथ दिने र प्रगतिका लागि साथ दिनेहरु नै असल मित्र हुन्छन् ।
कस्ता मान्छेमा भरोसा राख्ने ? भरोसा योग्य मानिसका ८ लक्षणहरु यस्ता हुन्छन् (एक प्रेरक कथा सहित)
‘ब्रेक अप’ पछि के गर्ने ? कसरी बलियो हुने ? ध्यान दिनु पर्ने १२ कुराहरु
आफ्नो संगत सहि छ कि गलत भन्ने कसरी चिन्ने ? ७ सजिला लक्षणहरु
कसरी थाहा पाउँने तपाईको सम्बन्ध ‘त्यो एउटा मान्छे’ सँग हो कि होइन ?
आफ्नो कुलतबाट कसरी उम्किने ? कुलतलाई कसरी राम्रो लतले विस्थापित गर्ने ?
अनेकौँ ठक्करका बाबजुद सफल बनेका स्टिभ जब्सको जीवनी र महान भनाइ